सहकारीको गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यक्रम विवादमा «
सहकारीको गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यक्रम विवादमा
प्रकाशित मिति : कार्तिक २८, २०७७ शुक्रबार
बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको गुणस्तर प्रमाणीकरण गर्ने कार्यक्रम विवादमा पर्न थालेको छ । गुणस्तर मापन गर्दै दिइने ब्राण्डका लागि आर्थिक चलखेल भएको र गुणस्तर सुनिश्चितता गरिएका संस्थामै कैफियत देखिन थालेपछि कार्यक्रमकै विश्वसनियतामा प्रश्न उठ्न थालेको हो ।
नेपालमा एसियाली ऋण महासंघ (अक्कु) तथा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) ले सहकारीको गुणस्तर सूनिश्चितता गर्ने ब्रान्डिङ कार्यक्रम एक्सेस वि. सं. २०६५ देखि सञ्चालन गर्दै आएका छन् । हाल यस कार्यक्रममा ६ दर्जन संस्थाआवद्ध छन् । नेफ्स्कूनले नै सहकारी विभागसँगको सहकार्यमा प्रोवेशन र आफैंले मात्र कब्र्स सञ्चालन गरिरहेको छ । दुवै कार्यक्रममा गरी ५ सय हाराहारीमा संस्था आवद्ध रहेका छन् । यसैगरी गत वर्षवाट राष्ट्रिय सहकारी बैंकले समेत एससीबीएल केयर नाममा ब्राण्डिङ कार्यक्रम सुरु गरेको छ ।
गुणस्तर सुनिश्चितता गर्नका लागि संचालन गरिएका कार्यक्रममा सहभागितामा सहकारीको आकर्षण बढ्दै गएपनि ब्राण्ड लिनका लागि भएका चलखेलका कारण विश्वसनियतामा भने प्रश्न उठ्न थालेको छ । ब्राण्डका लागि संस्थाहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको, आर्थिक चलखेल भएका, संस्थाको छनोट र लेखापरीक्षण पारदर्शी नभएको र सञ्चालक समितिको हस्तक्षेप भएका जस्ता घटनाहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन् । ब्राण्ड लिएकै संस्थाको गुणस्तरमा प्रश्न उठेपछि सहकारी नियामक निकाय सहकारी विभाग समेत प्रमाणीकरणबाट अलग्गिने भएको छ ।
पछिल्लो पटक एक्सेस कार्यक्रममा सिल्भर ब्राण्ड प्राप्त दोलखास्थिती मिलिजुली कालिञ्चोक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले ब्राण्डका लागि आर्थिक चलखेल गरेको र संस्थामा अनियमितता भएको घटना सार्वजनिक भएको छ । यस विषयमा समाचार सार्वजनिक भएपछि संघिय सहकारी विभागले सहकारी संस्था र नेफ्स्कूनलाई १५ लिने स्पष्टीकरण सोधेको छ । यसैगरी अक्कुले समेत संस्थामा छानबिनका लागि नेफ्स्कूनलाई निर्देशन दिएको छ ।
एसियाली स्तरको एक्सेस कार्यक्रममा सहकारी संस्थाहरूको गुणस्तरका आधारमा गोल्ड, सिल्भर र ब्रोन्च ब्राण्ड प्रदान गरिन्छ । यसमा गत वर्ष नेपालमा ८ वटा संस्थाले सिल्भर र २४ संस्थाले ब्रोन्च ब्राण्ड पाएका थिए । सिल्भर ब्राण्ड प्राप्त गरेको संस्थामै अनियमितता सार्वजनिक भएपछि ब्राडिङ कार्यक्रम नै विवादित भएको छ ।
नेपालस्तरको ब्राण्ड प्रदान गर्ने भन्दै नेफ्स्कूनले ५ वर्षयता सुरु गरेको प्रोवेशन कार्यक्रममा पनि ब्राण्ड वितरणमा अनियमितता भएको भन्दै सदस्यसंस्थाहरूले असन्तुष्टी राख्ने गरेका छन् । खराव सूचक भएका संस्थाले पनि ब्राण्ड पाएको भन्दै नेफ्स्कूनका कार्यक्रममा सदस्य संस्थाहरूले आवाज उठाए पनि सञ्चालकहरूले त्यसलाई थामथुम पार्दै आएका छन् ।
समाचार स्रोतका अनुसार ब्राण्ड छनोटका विषयमा असन्तुष्टी जनाउदै चितवनको एक सहकारी संस्थाले नेफ्स्कूनमा उजुरी गरेपनि आन्तरिक छानबिनका नाममा विषयलाई ओझेलमा पारिएको थियो । प्रोवेशन ब्राण्डलाई गतवर्षसम्म सहकारी विभागले समेत प्रमाणीकरण गर्दै आएको छ । सहकारी ऐनमा विभाग र रजिष्टारलाई गुणस्तर प्रमाणीकरण गरेर छुट्टै ब्राण्ड दिने अधिकार नभएपनि प्रत्यक्ष अनुगमन बिना नै नियमन अधिकार भन्दा बाहिरका संस्थालाई समेत ब्राण्ड दिदै आएको छ ।
विभागले यस वर्षबाट प्रमाणीकरण नगर्ने
यसैबीच, विभागले प्रोवेशन ब्राण्डको प्रमाणीकरण नगर्ने भएको छ । प्रोवेशन ब्राण्डको मूल्यांकन, छनोट तथा वितरण विश्वसनिय र पारदर्शी नभएको भन्दै विभागले ब्राण्ड प्रमाणीकरणका लागि अश्विकार गरेको हो । प्रोवेश ब्राण्ड प्रदान गर्नका लागि संस्था छनोट गर्न कात्तिक दोस्रो साता भएको बैठकमा समेत विभागका प्रतिनिधि सहभागी भएनन् । प्रमाणीकरणमा सहभागी नहुने भएकाले नै छनोट बैठकमा प्रतिनिधि नपठाइएको विभाग स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
ब्राण्डिङ भएका संस्थाको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्न थालेपछि विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले गत वर्ष नै प्रमाणीकरणमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका थिए । तर नेफ्स्कूनका तत्कालीन अध्यक्ष डिबी बस्नेतले राजनीतिक दबाब दिएर हस्ताक्षर गराएका थिए । प्रोवेशन कार्यक्रमअन्र्तगत नेफ्स्कूनले २०७४, २०७५, २०७७ सालमा गरी तीनपटक संस्थाहरूलाई ब्राण्ड प्रदान गरिएको छ । पहिलो वर्ष विभागले हस्ताक्षर नगरेपनि दोस्रो वर्षको ब्राण्डमा तत्कालिन रजिष्ट्रार केशवप्रसाद रेग्मीले र २०७७ सालको ब्राण्डमा रजिष्ट्रार पाण्डेले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
स्मार्ट च्वाइस र सेलपेबीच स्मार्ट क्यूआरमार्फत भुक्तानी गर्न सम्झौता
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भुक्तानी प्रणाली सन्चालनको अनुमति प्राप्त स्मार्टच्वाईस टेक्नोलोजिज लिमिटेड तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा राष्ट्रिय वाणिज्य
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सोमबार समुद्घाटन गरेसँगै सञ्चालनमा आएको भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको
सिटिजन्स बैंक -याडिसन होटल काठमाडौंबीच समझदारी
सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड र -याडिसन होटल काठमाडौंबीच सिटिजन्स बैंकका कार्डबाहकहरूलाई विशेष छुट दिने समझदारीपत्रमा